Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Makhaayadaha Delhi, hudheelada iyo baararka ayaa hela nasasho canshuur
Safarka Ganacsiga • kariska • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Hindiya • Investments • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Xukuumadda Delhi ee Hindiya waxay oggolaatay in laga cafiyo khidmadda liisanka badeecadaha, makhaayadaha, iyo hudheelada u adeega khamriga, iyada oo loo xidhay COVID-19 sababo la xidhiidha Abriil 16 ilaa Juun 20, 2021.
Ka dhaafida canshuuraha badeecada ayaa la filayaa inay socoto ilaa 2 bilood.
Sidoo kale waa la kordhiyay waa taariikhda lacag bixinta khidmadaha badeecada ee rubuca labaad laga bilaabo Juun 30, 2021, oo hadda dib loogu riixay Julaay 31, 2021.
Amarka ka dhaafida canshuuraha waxaa soo saaray Sh. Anand Kumar Tiwari, Dy. Gudoomiye (Cashuur)
Ururka Hoteellada iyo Makhaayadaha ee Waqooyiga Hindiya (HRANI) ayaa wakiillo u sameeyay Waaxda Canshuuraha iyo Ku-Xigeenka Wasiirka Sh. Manish Sisodia arrintan la xiriir.
Hoteel, baarar, ama makhaayad ayaa mas'uul ka ah bixinta khidmadda liisanka kahor intaan la bilaabin sannad-maaliyadeedka iyadoo la raacayo nooca oggolaanshaha, iyadoo kuxiran awoodda fadhiga; ajuurada waxay ku kala duwan yihiin nooca shatiga.
“Ururka Hotelada iyo Makhaayadaha ee Waqooyiga Hindiya waxay sameysay matalaad isku mid ah dhamaan 10ka gobol iyo UT-yada ee laga qaaday khidmada shatiga, ”ayuu yiri Madaxweynaha HRANI Surendra Kumar Jaiswal.
Wuxuu intaas ku daray in haddii ganacsigu yahay mid aan shaqeyneyn, in aan lacagta laga qaadin. Intaa waxaa dheer, in ganacsiyada la xiray sababtoo ah dowladda ayaa ka codsatay. Waan ku faraxsanahay in Delhi ogolaatay, laakiin waxaan sii wadeynaa inaan kawada hadalo gobolada harsan cafinta.
“Makhaayado badan oo magaalada ku yaal ayaan dib u bilaabin goobta cuntada lagu cuno illaa iyo hadda, iyaga oo ka baqaya cagaha hooseeya iyo khasaaraha oo kordhay Makhaayadaha qaarkood iyo baararka qaarkood durba si joogto ah ayaa loo xiray sababo la xiriira dhibaatada taagan, ”Ayuu yiri Garish Oberoi, Gudoomiyaha Gudiga Gobolka Delhi ahna Qasnajiga HRANI.
Intii uu u mahadnaqayay dowladda Delhi ee ay siisay gargaarka, Xoghayaha Guud Renu Thapliyal wuxuu codsaday in la soo saaro amar ku saabsan siideynta iyo ka-goynta hoteelada iyo xafladaha iyo in la ballaariyo isbitaalada sababo la xiriira mowjadda labaad iyo kororka xaaladaha. Waxay intaas ku dartay in xubnuhu had iyo jeer diyaar u yihiin inay taageeraan dowladda, laakiin hoos u dhaca kiisaska ka dib, waa in la sii daayo cutubyadan loona oggolaado howlo caadi ah sida kuwa kale ee caasimadda.
In kasta oo la siinayo wax gargaar ah, waxaa dib u dhac ku yimid soo saarista amar ka-bixidda xiriirka oo ah takoor. HRANI waxay soo gudbisay wakiillo badan waxayna ku rajo weyn tahay in cutubyadan ay dhowaan sii deyn doonto Xukuumadda Delhi.